Soddon sano ka dib liverpool oo Horyaalka Ingiriiska ku guuleysatay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Soddon sano ka dib liverpool oo Horyaalka Ingiriiska ku guuleysatay
Soddon sano ka dib liverpool oo Horyaalka Ingiriiska ku guuleysatay
Waxaa xalay soo afjarmay soddon sano oo Liverpool ay sugaysay horyaalka England ka dib markii ay 23 dhibcood ka sara martay Manchester City oo guuldaro 2-1 ay kala kulantay Chelsea.
Kooxda uu hogaamiyo Jurgen Klopp ayaa u baahnaa hal guul oo ay ku guulaystaa horyaalka, waxaase taasi u fudadeeyey guuldarada City taasi oo ka dhigan in todobada ciyaar ee dhiman aanay Man City soo qaban karin Liverpool.
Koobkan ayaa noqonaya kii 19-aad ee Liverpool ay qaado, waxaase uu noqonayaa kii ugu horeeyey tan iyo xilli ciyaareedkii 1989-1990.
Laakiin, inkastoo ay saddex bilood sugayaan in ay u dabaaldegaan guushan sababo fayraska Karona taageerayaa ayaa waxaa u sheegay inay guryaha joogaan duqa magaalada Liverpool.
Iyadoo masiibada caalamiga ah ay saameysay nolasha dalka Ingiriiska iyo dalalka kale waxaa hakad uu ku yimid ciyaarihii horyaalka, waxayna taasi ku abuurtay walwal iyo walbahaar taageerayaasha Liverpool in horyaalkii ugu horreeyey muddo soddon sano uu halkaasi ku libdho, maadaama ay jireen soo jeedin aheyd in ciyaaraha gabi ahaanba la iska dhaafo, iyadoo aan cidina koon ku guulaysan.
Nasiib wanaag waxay taageerayaasha iyo ciyaaryahanada Liverpool rajadu u soo laabatay bishan ka dib markii labaatanka kooxood ee horyaalka Ingiriiska ka ciyaareen iyo dawladu isku raaceen in ciyaaraha dib loo bilaabo.
Previous articleMadaxweynayaasha Galmudug & Puntland oo kulmaya
Next articleXiisad dagaal oo ka taagan degaano ka tirsan G/Galgaduud